Lenovo si na Moto X gawa ugbu a Moto Z | Gam akporosis
Moto Z ga-eji dochie Moto X dị ka ọkwa ọhụrụ
Kedu otu esi achọ ịmata na Sony esila na usoro Z gaa na X ma na ugbu a anyị nwere otu ihe ahụ, mana ụzọ ọzọ dị n'akụkụ, yana Lenovo kpebiri na ọhụrụ Moto X na-anọchi maka usoro Moto Z. Mgbe afọ atọ rerechara Moto X a, atụmatụ maka oge okpomọkụ a dị iche.
Gbanwee ọ dịghị ma ọlị, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ agachaghị ịga nke ọma site na X ruo Z. Ọchịchọ ọzọ bụ na ọbụlagodi Samsung n'onwe ya echepụtala ngwaọrụ nke ga - eji X dị ka ọ na - eme na Galaxy X. Yabụ na ọ fọrọ nke nta ka Motorola gbanwere ahịa. kaadị ahia na Samsung na Sony.
Motorola nwere ọkọlọtọ abụọ na usoro nke iweta ya n'ahịa, nke akpọrọ aha n'ime ya dị ka Vertex na Vector Thin. Ebumnuche abụọ ga-abụ isi njikọ n'etiti ndị bidoro n'afọ gara aga na akara ọhụụ akpọrọ Moto Z. Ihe Vector ga-abụ Moto Z Style, mgbe a ga-akpọ Vertex Moto Z Play.
Mgbanwe nke ụka a ga-eme na Droid Turbos na Droid Maxx, iji dochie anya «Droid Edition» na njirimara ya zuru ụwa ọnụ, yabụ anyị nwere ike ịchọta Moto Z Play Droid Edition.
Maka onye ọrụ nke na-achọ mbipụta ọhụrụ nke otu n'ime Moto ndị a kwa afọ, ọ nwere ike iduga ya ghọọ ezigbo ọgbaghara, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ọ na-anọgide na aha mgbanwe, ma abụọ Moto G4 na Moto G4 Plus ha na-aga n'ụzọ nkịtị na ekwentị 5,5 ″, mgbe ha bụ otu n'ime obere igwe ekwentị.
Anyị ga-ahụ ebee ka ndị a gbagọrọ agbagọ na njedebe maka usoro a nke smartphones nke chọtara igodo ziri ezi ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eso ụzọ n'ime afọ atọ a nke ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Moto Z ga-eji dochie Moto X dị ka ọkwa ọhụrụ
ZenFone 3 pụtara na AnTuTu
Google na akwadebe iwebata ngwa iwu olu ya maka ụlọ